Akanakisa Sachigaro Mugadziri uye Fekitori | Medo
MEDO inogadzira akasiyana-siyana uye akasununguka matauriro echitsiko. Isu tinogara tichigadzirisa kwedu kuunganidza kuitira kuti ikwane musika wako. Nehunyanzvi hwehunyanzvi uye maitiro ekudzora mhando, isu tinokupa iwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zvinokubatsira iwe kuvaka yako mhando.
Heano zvigaro zvakavimbika zvinopa iwe dhizaini dhizaini mune dzakasiyana siyana zvigadzirwa zvinosanganisira huni uye dehwe, simbi uye dehwe.
Iwo ezvigaro zvemazuva ano & zvenguva dzazvino zvekudyira zvinogadzirwa neMEDO zvinogona kuve zvakatenderedzwa nematafura ekudyira akasiyana. Zviri nyore kuti iwe upe yakakwana maseti ekudyira kumutengi wako.
Kugadzira Yemahombekombe Leisure Armchairs
Chigaro cheganda chine kabhoni simbi yegumbo yekuzorora cheya mune echinhu dhizaini nebapiro rinobata chigaro chemaoko chinoonekwa mukati nekukoka kupfava kwechigaro uye kumashure.
Simbi Yemafuremu Leisure Armchairs
Iyo base inogadzirwa nesimbi uye chigaro chehushi chine channeled goose pasi padding neiyo yepakati yekuisa mukati memusoro furo.
Pasi pehupamhi hwepamusoro pane chidimbu chese chesimbi.
Iyo armrest ine dehwe inounza kwatiri kunzwa kwakanaka.
Diki Yekuzorora Armchairs Yekurara
Leather uye armchair dhizaini dhizaini. Iri padhuze nemasikirwo muvara. Iyo chigaro uye musana zvinokwenenzverwa neyakareruka kushoni mu microfiber dehwe. Microfiber yeganda inotsvedza uye yakasimba. Kubva padanho rekutarisa, iko kugadzika pachigaro kwakadzika kwazvo uye kwakasikwa.
Hwomutambarakede Nyaradzo Leisure Chigaro
Ruvara rwebhuruu mawoko. Inokodzera nzvimbo yekufundira uye nzvimbo yekutandarira. Chigaro ichi chinoshandisa dehwe rakazara. Musana uye zvigaro zvemaoko zvinoputira muviri wese mukati. Ikoko kune kamushini kadiki kanopokana nemusoro wemusoro, izvo zvinoita kuti chigaro chemaoko chisazononoka. Paunenge wakaneta, unogona kutora nguva yekuzorora pachigaro.
Iyo Smart Leather Kudya Chigaro
Backrest mune yakarongeka polyurethane yakavharwa mune inochinja isingatsvi nemoto. Backrest uye chigaro casing mune inofema kupisa-yakasungwa moto-isingagadzirise fiber.
Chinyorwa: microfiber dehwe.
Dining gumbo inogadzirwa nesarbon simbi.
Yemazuva ano Style Kudya Sachigaro
Ndeya minimalism dhizaini yekumusoro ye backrest chimiro uye makumbo. Yakawedzera dehwe iyo yekumashure mamiriro uye makumbo uye izvo zvinhu: huni + premium saddle dehwe negumbo rekudya: huni hwakasimba.
Leisure Kudya Sachigaro
Yakasimudzwa zvakakwana mumucheka kana dehwe uye chigaro chakapfekedzwa muganda, iyo yese-jira upholstery vhezheni upholstery ye backrest chimiro nemakumbo.
Yakawedzera dehwe, chigaro mumucheka; upholstery ye backrest mamiriro uye makumbo.
Chinyorwa: microfiber dehwe + jira.
Sachigaro Yekuverenga Yakagadzikana
Gara mune plywood ine yakakwira yakasarudzika yerabho chikamu chakakwenenzvera webhu, yakaputirwa mune isina moto polyurethane furo. Iyo chigaro uye yekumashure zvino zvakafukidzwa nemweya unodziya-wakasungwa unopisa moto fiber upholstery.
Kudya Makumbo kunoitwa nekabhoni simbi.
MEDO Minimalism Yakanakisa Leisure Armchair Mugadziri
Kugadzira zvigaro zvekuzorora zvemaoko inyanzvi mukugadzira izvo izvo izvo vatengi vako vachada. Kunyangwe tichitarisa kunyaradzwa neergonomic umbozha zvigaro kana kujekesa mhando nezvakakwira-kumagumo zvigadzirwa uye dhizaini, yedu tsika yakasarudzika yekuzorora maoko zvigaro zvinokodzera zvigadzirwa zvako.
Simbi furemu Leisure armchairs akateedzana.
Iyo base inogadzira simbi. Pane zvikamu zviviri zvesimbi pakati pezasi kwemaoko maviri. Kumashure kwekuseri uye kumberi pachigaro chechigaro zvakare kune simbi yekutsigira. Saka chigadziko chinorema uye chakasimba. Iyo holster ndiyo yekunze chaiyo yeganda muorivhi-grey ruvara. Pasi pehupamhi hwepamusoro pane chidimbu chese chesimbi. Iyo armrest ine dehwe inounza kwatiri kunzwa kwakanaka.
Masikati masikati machena, garai pachigaro chekuzorora bata bhuku, isa mukombe weAmerican kofi pane tafura yedivi, wozonakidzwa nezororo rakakura. Zvigaro zvidiki zvekuzorora zveimba yekurara isu tinosimudzira takagara tinzwe, zviri nani zvirikubatanidzwa pamwe nedema-pfuti-mavara Hardware, yakaiswa muimba yekurara. Izvo zvakanaka kwazvo kubhedhuru.
Nzvimbo dzekuzorora dzezvipenga zvidiki dzinoshandisa chiyero chegoridhe chakatenderera, uye furemu yepasi iri simbi inorema, yakasimba. Iwo makushingi nemashure akasunganidzwa zvakakwana pamwe chete. Iyo yakasarudzika yegrey donje yerineni inotaridzika zvakanyanya kuvezwa. Isa mutsago pachigaro uye wonda, zviri nyore. Chikurukuru, inochengetedza nzvimbo.
MEDO Minimalism Kudya Zvigaro Mugadziri
Uri kutsvaga cheya yekudyira? Heino sosi yakavimbika iyo inokupa iwe inoyevedza dhizaini mune dzakasiyana siyana zvinhu zvinosanganisira huni uye dehwe, simbi uye dehwe.
Iwo wazvino emhando yepamusoro ekudyira macheya akaburitswa neMEDO anogona kutenderedzwa nemhando dzakasiyana dzekudyira tafura. Zviri nyore kuti iwe upe yakakwana maseti ekudyira kumutengi wako.
Seyako yakasarudzwa dota dota uye yepamusoro microfiber dehwe, isu tinokwanisa kupa zvigaro zvekudyira pamutengo wakaringana uye mhando. Yakagadzirwa neyemberi muchina uye kusvika parizvino tekinoroji, iwe unogona kuvimba nesu kuti tishande uye mhando.
Yakakwirira Kudzoka Kudya Zvigaro
Icho chigaro chakareruka uye chine rupo chekudyira chisina kunyanyisa kuchinjiswa, inova madhigirii makumi mapfumbamwe nemugaro wekugara, unonaka. Ruvara rweiyi ndeimwe yemavara anozivikanwa. Izvo zvine hunyanzvi zvakaenzana nematafura akasiyana ekudyira.
Kudya zvigaro nemaoko, izvo zvinowanzoonekwa mumainjiniya mapurojekiti, kamuri yekudzidza, yekudyira, yekudyira, uye zvimwe zvakawanda zviitiko zvakasiyana. Iine mavara akasiyana anowanikwa pane yako sarudzo. Nzvimbo dzekumisidzana hadzina kukwirira zvakanyanya, asi kwese nzira inogona kunyatsobata maoko ako, kukupa imwe nyaradzo. Iyo inochinjika mukufananidza akasiyana matafura ekudyira.
Yemazuva Ano Leather Uye Fabric Kudya Zvigaro
Iyo dhizaini nyowani, Iyo dhizaini-inofungidzirwa zvinhu yave imwe yeakajairika edzimba dzemazuvano. Mumhepo diki, zvishongo zvemazuva ano zvekudyira matehwe mumiriri.
Armrest Kudya Sachigaro.
Makona ese ndeekunyaradza, neunyanzvi hwekugadzira. Greycale ine mwero uye yakanakira kuenzanisa machena machena ekudyira matafura. Iyo chiuno chakakombama pakati, uchingotsigira musana wako. Zviri nyore uye zvinoshanda.
Yemazuva Ano Fenicha Leisure Sachigaro
Sachigaro Sachigaro 760 * 1000 * 990mm Chigaro kukwirira: 410mm
Zvinhu: Mucheka / Microfiber dehwe / Rutivi rwechokwadi rweganda
Kudya Kudya: Carbon Simbi Gumbo
Sachigaro Sachigaro 770 * 840 * 770mm Chigaro kukwirira: 430mm
Sachigaro Sachigaro 770 * 870 * 900mm
Kukwirira kwechigaro: 390mm
Zvinhu: Mucheka / Microfiber dehwe / Yechokwadi dehwe
Sachigaro Sachigaro 830 * 840 * 870mm
Kukwirira kwechigaro: 400mm
Kudya Kudya: Stainless Simbi Gumbo
Yemazuva Ano Fenicha Kudya Sachigaro
Kudya Sachigaro 670 * 630 * 750mm
Zvinhu: Svuta ukanyatsotarisisa, 304 Stainless simbi titanium yakafukidzwa
Kudya Sachigaro 620 * 690 * 820mm
Zvinhu: Microfiber dehwe & Mucheka
Kudya Sachigaro 510 * 550 * 800mm
Zvinhu: Microfiber dehwe
Zvinhu: Wood + Premium chigaro cheganda
Kudya Kudya: Solid Wood Gumbo